အိမ်တွေကြီးလာသလောက် မိသားစုတွေနည်းပါးလာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ “ဒီခေတ်ကြီး” – Tameelay
အိမ်တွေကြီးလာသလောက် မိသားစုတွေနည်းပါးလာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ “ဒီခေတ်ကြီး”
ကျွန်တော်တို့ အခုခေတ်ရဲ့ ကသိ ကအောက်တွေများ
မူလစာရေးသူ Dr. Bob Moorehead
မိမိဘာသာပြန်ထားတဲ့ အနက်အဓိပ္ဗါယ်ကို အားမရနိုင်လို့ အင်္ဂလိပ် မူရင်းကိုပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ အိမ်တွေ ပိုပိုကြီးမားလာပါတယ်။ မိသားစုကျတော့ ပိုပို သေးငယ်လာတယ်။
အသုံးအဆောင် အဆင်ပြေမူတွေ ပိုိုပိုများလာတယ်။ ပေးနိုင်တဲ့ အချိန်ကျတော့ ပိုပို နည်းသွားတယ်။
ဘွဲ့ဒီဂရီတွေ ပိုပိုများလာတယ်။ အသိပညာတွေ ပိုိုပိုနည်းသွားတယ်။
ဗဟုသုတတွေ ပိုပိုများလာတယ်။ ဆုံးဖြတ်နိုင်အား ပိုပို နည်းသွားတယ်။
ပညာရှင်တွေ ပိုပိုများလာတယ်။ ပြသနာတွေလည်း ပိုပိုထူလာတယ်။
ဆေးဝါးတွေ ပိုပိုများလာတယ်။ ကျန်းမာရေး ပိုပို အားနည်းလာတယ်။
အသုံးအဖြုန်းကြီးလွန်းတယ်။ အရယ်အပြုံး နည်းလွန်းတယ်။
ကားမောင်းတာ မြန်လွန်းတယ်။ ဒေါသထွက်တာ မြန်လွန်းတယ်။
အိပ်ယာဝင်ချိန် နောက်ကျလွန်းတယ်။ အိပ်ယာထချိန်ကျတော့ မောဟိုက်လွန်းတယ်။
စာဖတ်တာ နည်းလွန်းတယ်။ တီဗွီကြည့်ချိန် များလွန်းတယ်။
ပြီးတော့ ဘုရားရှိခိုးချိန် နည်းလွန်းတယ်။
We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too little and lie too often. We’ve learned how to makealiving, but notalife; we’ve added years to life, not life to years.
ကျွန်တော်တို့ဟာ ပစ္စည်းဥစ္စာ မနားတန်း စုဆောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးကျတော့ ကျဆင်းသွားပါတယ်။ စကားများလွန်းပြီး အချစ်နည်းလွန်းတယ်။ ပြီးတော့ လိမ်ညာမူ များပြားလွန်းတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘ၀ရပ်တည်မူအတွက် ပညာအများကြီး သင်ယူတယ်။ ဘ၀ အနစ်သာရကိုကျတော့ မခံစားတတ်တော့ဘူး၊ ဘ၀အပေါ် အချိန်သာကုန်လွန်စေပြီး အချိန်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ ဘ၀ကို အနစ်သာရ မတိုးစေနိုင်ခဲ့ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်တဲ့အိမ်တွေ ပိုပို ကောင်းမွန်လာတယ်။ စိတ်ပိုပိုပြီး တိုတတ်လာတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မောင်းနင်တဲ့လမ်း ပိုပို ကျယ်ပြန့်လာတယ်။ အမြင်တွေကျတော့ ပိုပို ကျဉ်းမြောင်းသွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အများကြီး ၀ယ်ယူကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၀ယ်ယူမူကနေ ရရှိတဲ့ ပျော်ရွှင်မူ နည်းနည်းလာတယ်။
We’ve been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new neighbor. We’ve conquered outer space, but not inner space. We’ ve split the atom, but not our prejudice; we write more, but learn less; plan more, but accomplish less.
ကျွန်တော်တို့ လကမ္ဘာကို သွားချီ ပြန်ချီ လုပ်နို်င်ပြီ၊ ဟိုဘက်ဒီဘက် လမ်းကူးပြီး အိမ်နီးနားချင်းကို နူတ်ဆက်ဖို့ကျတော့ ရင်လေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပြင်ပ ကမ္ဘာကြီးကို ကြီးစိုးနိုင်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ကိုတော့ မပိုင်စိုးဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အသေးဆုံး ဒြပ်စင်ကို ခွဲခြမ်းနို်င်ပြီ၊ ဒါပေမဲ့ မလိုမုန်းထားမူကို မဖြိုခွင်းနိုင်သေးဘူး။
ကျွန်တော်တို့ များများရေးတယ်။ နည်းနည်းပဲ သင်ယူတယ်။
စီမံကိန်းရေးဆွဲတာ များလွန်းတယ် ။ အကောင်အထည်ဖေါ်တာနည်းတယ်။
We’ve learned to rush, but not to wait; we have higher incomes, but lower morals. We build more computers to hold more information, to produce more copies, but have less communication. We are long on quantity, but short on quality.
ကျွန်တော်တို့ဟာ အချိန်ကို အပြေးအလွှားလုယူတယ်။ ဒါပေမဲ့ စောင့်ဆိုင်းဖို့ စိတ်မရှည်တော့ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ၀င်ငွေပိုပ်ုို မြင့်လာကြတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တ ပိုမို နိမ့်ကျသွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ အများကြီး ပြုလုပ်ပြီး သတင်းအချက်အလက် မြောက်များစွာသိမ်းဆည်းထားတယ်။ ကော်ပီ အများကြီးကူးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်မူ ပိုပို နည်းပါးသွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အရေအတွက် တိုးပြီး ပိုင်ဆိုင်လာကြပါတယ်။ အရည်အသွေး လျှော့ကျသွားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အစားမြန်ပြီး အစာချေမူ နှေးကွေးတဲ့ ခေတ်ဖြစ်လာတယ်။
အရပ်အမောင်းကြီးထွားပြီး အကျင့်စာရိတ္တ နည်းပါးတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်။
ဆက်ဆံရေး အေးစက်တဲ့ခေတ်ကြီး ဖြစ်လာတယ်။
အနားယူတဲ့အချိန် များလာပြီး ပျော်ရွှင်မူ အစစ်နည်းပါးလာတယ်။
အစားအသောက်အမျိုးအစား များပြားလာပြီး အဟာရ နည်းပါးလာတယ်။
လင်မယား နှစ်ယောက်လုံး အလုပ်လုပ်တဲ့ မိသားစု များလာတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးကွဲနူန်းကလည်း မြင့်တက်လာတယ်။
အိမ်ပြင်ဆင်မူ ပိုမိုတောက်ပြောင်လာတယ်။ မိသားစု ကွဲ ပိုမို များပြားလာတဲ့ ခေတ်ဖြစ်တယ်။
Credit – Aung Ko Latt
ကြှနျတျောတို့ အခုခတျေရဲ့ ကသိ ကအောကျတှမြေား
မူလစာရေးသူ Dr. Bob Moorehead
မိမိဘာသာပွနျထားတဲ့ အနကျအဓိပ်ဗါယျကို အားမရနိုငျလို့ အင်ျဂလိပျ မူရငျးကိုပါ တငျပေးလိုကျပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့နထေိုငျတဲ့ အိမျတှေ ပိုပိုကွီးမားလာပါတယျ။ မိသားစုကတြော့ ပိုပို သေးငယျလာတယျ။
အသုံးအဆောငျ အဆငျပွမေူတှေ ပိုိုပိုမြားလာတယျ။ ပေးနိုငျတဲ့ အခြိနျကတြော့ ပိုပို နညျးသှားတယျ။
ဘှဲ့ဒီဂရီတှေ ပိုပိုမြားလာတယျ။ အသိပညာတှေ ပိုိုပိုနညျးသှားတယျ။
ဗဟုသုတတှေ ပိုပိုမြားလာတယျ။ ဆုံးဖွတျနိုငျအား ပိုပို နညျးသှားတယျ။
ပညာရှငျတှေ ပိုပိုမြားလာတယျ။ ပွသနာတှလေညျး ပိုပိုထူလာတယျ။
ဆေးဝါးတှေ ပိုပိုမြားလာတယျ။ ကနျြးမာရေး ပိုပို အားနညျးလာတယျ။
အသုံးအဖွုနျးကွီးလှနျးတယျ။ အရယျအပွုံး နညျးလှနျးတယျ။
ကားမောငျးတာ မွနျလှနျးတယျ။ ဒေါသထှကျတာ မွနျလှနျးတယျ။
အိပျယာဝငျခြိနျ နောကျကလြှနျးတယျ။ အိပျယာထခြိနျကတြော့ မောဟိုကျလှနျးတယျ။
စာဖတျတာ နညျးလှနျးတယျ။ တီဗှီကွညျ့ခြိနျ မြားလှနျးတယျ။
ပွီးတော့ ဘုရားရှိခိုးခြိနျ နညျးလှနျးတယျ။
ကြှနျတျောတို့ဟာ ပစ်စညျးဥစ်စာ မနားတနျး စုဆောငျးတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျပိုငျတနျဖိုးကတြော့ ကဆြငျးသှားပါတယျ။ စကားမြားလှနျးပွီး အခဈြနညျးလှနျးတယျ။ ပွီးတော့ လိမျညာမူ မြားပွားလှနျးတယျ။
ကြှနျတျောတို့ဟာ ဘဝရပျတညျမူအတှကျ ပညာအမြားကွီး သငျယူတယျ။ ဘဝ အနဈသာရကိုကတြော့ မခံစားတတျတော့ဘူး၊ ဘဝအပျေါ အခြိနျသာကုနျလှနျစပွေီး အခြိနျပွောငျးလဲလာတာနဲ့အမြှ ဘဝကို အနဈသာရ မတိုးစနေိုငျခဲ့ဘူး။
ကြှနျတျောတို့ နထေိုငျတဲ့အိမျတှေ ပိုပို ကောငျးမှနျလာတယျ။ စိတျပိုပိုပွီး တိုတတျလာတယျ။
ကြှနျတျောတို့ မောငျးနငျတဲ့လမျး ပိုပို ကယျြပွနျ့လာတယျ။ အမွငျတှကေတြော့ ပိုပို ကဉျြးမွောငျးသှားတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အမြားကွီး ၀ယျယူကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ ၀ယျယူမူကနေ ရရှိတဲ့ ပြျောရှငျမူ နညျးနညျးလာတယျ။
ကြှနျတျောတို့ လကမ်ဘာကို သှားခြီ ပွနျခြီ လုပျနျိုငျပွီ၊ ဟိုဘကျဒီဘကျ လမျးကူးပွီး အိမျနီးနားခငျြးကို နူတျဆကျဖို့ကတြော့ ရငျလေးတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ပွငျပ ကမ်ဘာကွီးကို ကွီးစိုးနိုငျပွီ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့အတှငျးစိတျကိုတော့ မပိုငျစိုးဘူး။
ကြှနျတျောတို့ဟာ အသေးဆုံး ဒွပျစငျကို ခှဲခွမျးနျိုငျပွီ၊ ဒါပမေဲ့ မလိုမုနျးထားမူကို မဖွိုခှငျးနိုငျသေးဘူး။
ကြှနျတျောတို့ မြားမြားရေးတယျ။ နညျးနညျးပဲ သငျယူတယျ။
စီမံကိနျးရေးဆှဲတာ မြားလှနျးတယျ ။ အကောငျအထညျဖျေါတာနညျးတယျ။
ကြှနျတျောတို့ဟာ အခြိနျကို အပွေးအလှားလုယူတယျ။ ဒါပမေဲ့ စောငျ့ဆိုငျးဖို့ စိတျမရှညျတော့ဘူး။
ကြှနျတျောတို့ ၀ငျငှပေိုပျုို မွငျ့လာကွတယျ။ အကငျြ့စာရိတ်တ ပိုမို နိမျ့ကသြှားတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ကှနျပြူတာ အမြားကွီး ပွုလုပျပွီး သတငျးအခကျြအလကျ မွောကျမြားစှာသိမျးဆညျးထားတယျ။ ကျောပီ အမြားကွီးကူးကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခငျြးခငျြး ဆကျသှယျမူ ပိုပို နညျးပါးသှားတယျ။
ကြှနျတျောတို့ဟာ အရအေတှကျ တိုးပွီး ပိုငျဆိုငျလာကွပါတယျ။ အရညျအသှေး လြှော့ကသြှားပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ဟာ အစားမွနျပွီး အစာခမြေူ နှေးကှေးတဲ့ ခတျေဖွဈလာတယျ။
အရပျအမောငျးကွီးထှားပွီး အကငျြ့စာရိတ်တ နညျးပါးတဲ့ခတျေဖွဈတယျ။
ဆကျဆံရေး အေးစကျတဲ့ခတျေကွီး ဖွဈလာတယျ။
အနားယူတဲ့အခြိနျ မြားလာပွီး ပြျောရှငျမူ အစဈနညျးပါးလာတယျ။
အစားအသောကျအမြိုးအစား မြားပွားလာပွီး အဟာရ နညျးပါးလာတယျ။
လငျမယား နှဈယောကျလုံး အလုပျလုပျတဲ့ မိသားစု မြားလာတယျ။ အိမျထောငျရေးကှဲနူနျးကလညျး မွငျ့တကျလာတယျ။
အိမျပွငျဆငျမူ ပိုမိုတောကျပွောငျလာတယျ။ မိသားစု ကှဲ ပိုမို မြားပွားလာတဲ့ ခတျေဖွဈတယျ။
အဖေခေါ်ခ …တစ်​ရက်​ ၆၀၀ ကျပ် !!! (သားသမီးတိုင်း ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ)
ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ..ကိုထွန်းနဲ့မကြည်ပြာ ဆိုတဲ့လင်မယား သားသမီးသုံးယောက်မွေးဖွားထားတယ်ပေါ့ ! ကိုထွန်းဟာ အရက်ကျွန်ဖြစ်သွားပြီ ! အရက်ကလွဲလို့ ..သူ့ဘဝမှာ ဘာမှမရှိ ! မကြည်ပြာကိုလည်း သူဂရုမစိုက်တော့ ! သားသမီးသုံးယောက်ကိုလည်း..စိတ်မဝင်စားတော့ ! သူသိတာက.. မကြည်ပြာဆီကရမဲ့ ..အရက်ဖိုး မနက် ၂၀၀၊ နေ့လည် ၂၀၀ နဲ့ ညနေ …
ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းကို ဘယ်လိုကုသမလဲ ???
ချွေးပေါက်ကျယ်တာကလည်း မိန်းကလေးတွေ အတွက် ဒုက္ခတစ်မျိုးပဲ မဟုတ်ပါလား? မှန်ထဲကြည့်လိုက်ရင် သူများတွေလို ညက်ညက်လေး ဖြစ်ချင်ရတာ။ မြတ်ကြည်လည်း အပါအဝင်ပေါ့။ ချွေးပေါက်လေးတွေက ခန္ဒာကိုယ်က မလိုအပ်တဲ့ အညစ်အကြေး၊ ချွေးတို့ကို စွန့်ထုတ်ပေးသလို အသားအရေ စိုပြေလန်းဆန်းဖို့အတွက် အဆီကိုလည်း ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အသားအရေ ခြောက်တဲ့သူတွေဟာ စိုပြေတဲ့သူတွေ …